Hatramin'ny 90m —— Radara fisorohana vato misakana vaovao 77Ghz MMW ho an'ny UAV avy amin'ny Nanoradar-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Hatramin'ny 90m - —Fandrefana vaovao ho an'ny fisorohana ara-dalàna an'i UAF avy any Nanoradar
Fotoana: 2018-11-14 Hits: 27
Tato ho ato dia nampidirina UAV tamin'ny sehatry ny fambolena, herinaratra ary indostria manokana misy fitomboan'ny fangatahana. Na izany aza, ny fisorohana ny fifandonana mandeha ho azy no olana efa hatry ny ela an'ny UAV amin'ny fampiharana azo ampiharina. Ny rafitra fisorohana ny sakana tsy miankina UAV dia mety hampihena ny lozam-pifamoivoizana UAV, handratra ny olona sy ny fifandonana amin'ny trano noho ny olana ara-dalàna sy ny fahitana.
Fa maninona no mifidy ny radarin'ny fisorohana ny onjam-peo MR72-UAV 77GHz avy any Nanoradar?
* Halaviran'ny famaritana lava: hatramin'ny 90 metatra ho an'ny RCS 5 target kendrena, ary 40m ho an'ny tsipika fanamafisam-peo avo;
* Fahamarinana avo lenta: Raha ampitahaina amin'ny radar 24GHz, dia nohatsaraina hatramin'ny intelo ny famaritana isan-karazany ny radara, ary ny fahombiazana tsara kokoa ho an'ny fahafantarana ny sakana;
* Rantsana roa miasa miaraka amin'ny maody: FOV malalaka amin'ny fomba fohy; halaviran'ny detection lava amin'ny maody afovoany;
* Ny zoro alalàn'ny maody afovoany dia 15.6 °, izay mampihena ny fitsabatsabahana amin'ny tany rehefa mitongilana ny toe-tsaina UAV;
* Fahaiza-manao fanoherana mahery vaika: tsy tratry ny hazavana, ny toetr'andro, ny tontolo iainana, ny tabataba ary ny fanelingelenana elektromagnetika tsy misy olona;
* Habe azo ampitahaina: kely ny haben'ny radar fisorohana vato misakana 77GHz MMW, mifanaraka amin'ny fampiharana isan-karazany;
Ohatra fitsapana ny MR72-UAV avy ao Nanoradar ：
Parameter teknika MR72-UAV ：
About Nanoradar ：
Nanoradar dia natsangana tamin'ny 2012 izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana radara onjam-peo milimetatra ho fiarovana, UAV, Automotive, Smart Traffic ary fampiharana indostrialy hafa, izay mandrakotra ny senatera radar 24GHz, 77GHz ary 79GHz. Nahomby ny famolavolana vokatra radar MMV modely 10+ izay mifototra indrindra amin'ny taratra MIMO sy ny haitao radar kognitika. Ny elanelam-pandrefesana sensor an'i Nanoradar dia manarona 30-450meters. Ny marina dia hatramin'ny 85% ho an'ny radar fiarovana hahafantarana ireo mpandeha an-tongotra. Amin'ny maha-mpanamboatra radara MMV azy any Shina, ny vokatra Nanoradar dia amidy mafana any Etazonia, Korea, The United Kingdom, France sns.
PREV: Fa maninona no malaza be vao haingana ny rafitra fanaraha-maso horonantsary radar
MANARAKA : 'New Breakthrough, New Level' Nanoradar namoaka 200 metatra Altimeter Radar